Mayelana NATHI | I-Hebei Dfl Minmet Refractories Co., Ltd.
1, Advantage izimpahla
Inkampani ye-DFL eyasungulwa ngonyaka we-2004 yinkampani ephelele ebhekiswe ebhizinisini lokukhiqiza nokuhweba.
Sisebenza ngokukhethekile kumatayela wemvelo wemvelo, ukufakwa kwamatshe odonga, ama-ledgestones, amatshe amancane, amatshe agxishiwe, itshe lokuvula, amatshe avulekile, i-mosaic, amatshe amatshe amatshe, imikhiqizo yemidwebo yemabula nokunye okusetshenziswa kakhulu ekwakhiweni nasekulimeni kwezimbali.
2, Ithumela Amazwe
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-16 yentuthuko, i-DFL ibithumela eMelika, eCanada, e-Australia, e-Argentina, eParaguay, eChile, eMexico, ePeru, e-Italy, e-Ireland, eSpain, eSweden, eJapane, eHongKong, eMorocco, eTunisia, eDijibouti, e-Angola, e-Albania amazwe amaningi kanye nezifunda.
3, Uhlaka lweNkampani
Sineminyango emine yokuthengisa, umnyango owodwa wemibhalo osebenza ngaphezu kweminyaka eyishumi futhi ufunde amadokhumende akhethekile, umnyango owodwa wokulawula ikhwalithi.Ngakho-ke ngemuva kokwenza i-oda, usebenza ngokuqedela futhi sizokwenza sonke isinyathelo esilandelayo.
Wonke amakhasimende yi-VIP yethu, hhayi ngoba i-oda lakho lincane, futhi ngeke likuthathe ngokungathi sína. Akunandaba noma ngabe i-oda elikhulu noma i-oda elincane, sinenqubo efanayo futhi sidinga ukuhlolwa okuqinile ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi iyafaneleka ngaphambi kokuthi siyithumele kuwe.
Ngaphezu kwalokho, uzoba nabasebenzi bakho bebhizinisi abakhethekile, futhi sigxile ekusebenzeleni ozakwenu, abadinga ukusebenza iminyaka engaphezu kwemithathu, ngakho-ke nizokwazi ukuxhumana ngokushelela, futhi ngeke sishintshe kalula abasebenzi bebhizinisi ukuqinisekisa ukuthi wachaza imininingwane. Ngeke unganakwa, akudingeki ukuthi uphinde isicelo sakho kaninginingi.
AMATSHI EMVELO NGOKWEMVELO
UKUFUNA KWEMVELO, NGAPHANDLE KWEMVELO.
UKULINDELELA UKUKUSEBENZELA ENSIMINI YAMATSHI EMVELO
I-DFL inezinto zokusetshenziswa eziningi nezinsizakusebenza zasefekthri, kanye nobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu bokukhiqiza ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukile. Noma ngabe ungumhambisi, umthengisi wempahla enkulu, noma isitolo esikhulu esikhulu, singanikeza ngezinsizakalo ezenziwe zaba ngezakho.
I-DFL umphakeli okhethekile wamazwe omhlaba, silandela imigomo ye- “Ikhwalithi ethembekile, intengo enengqondo, ukulethwa ngesikhathi esifanele, insizakalo yobungcweti”, yethu imikhiqizo yethu ihlolwe futhi yaba nomphumela ofanelekayo.
Inani Lethu Eliyinhloko
---- Ukuhlwanyela imbewu yeKarma enhle
---- Asithumeli imikhiqizo yethu kuphela, kepha futhi nensizakalo yethu, umthwalo wethu wemfanelo nothando ekuthunyelweni ngakunye.
Amatshe e-DFL, ukuphishekelwa kwemvelo, ngaphezu kwemvelo. Sethemba ngobuqotho ukuthi singaba nethuba lokubambisana nawe.